WFP oo dhimaysa cunada ay siiso dadka qaxootiga ee kunool dalka kenya – Balcad.com Teyteyleey
WFP oo dhimaysa cunada ay siiso dadka qaxootiga ee kunool dalka kenya
Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan cuntada ee WFP ayaa ku dhowaaqday inay dhimayso boqokiiba soddon cuntadii ay siin jirtey qaxooti ka badan afar boqol oo kun kuwaasoo ku jira xeryo ku yaal dalka Kenya.
Dhimista cuntadan ayaa ka dhalatay kadib markii ay hay’adu weysay dhaqaalihii ay ku bixin jirtey xeryahaas sida laga soo xigtey saraakiil u hadashay WFP.
Xeryaha cuntada laga jaray ayaa waxaa ay yihiin Dhadhaab iyo Kakuma kuwaasoo hoy u ah inta badan Soomaali iyo qaxooti ka soo jeeda Koofurta Sudan.
WFP ayaa sheegtay inay u baahnayd lacag gaareysa $28.5 million si ay daboosho baahida cunto ee qaxooti gaaraya 420,000 lixda bilood ee soo socota.
“Sida deg-degta leh ee loogu joojiyay kaalmada cuntada ayaa ah dhibaato ku noqonaysa qaxootiga kuwaasoo badankood ay ku tiirsanaayeen cunto maalmeedkooda hay’ada WFP,”ayay tiri Madaxa hay’ada WFP ee dalka Kenya Annalisa Conte.
Dhaqaalaha hoos u dhacay ayaa ku soo beegmaya lix bil kadib markii ay Qaramada Midoobay ka digtey in dunida ay wajahayso halistii ugu xumeyd ee dhinaca bani’aadaninimada kadib dagaalkii labaad ee dunida,sababo la xiriira abaaro ku dhuftay awadamada Koofurta Sudan,Somalia,Nigeria iyo Yemen.
Warbixin ay bishii hore soo saartay hay’ada ka digta abaaraha ayaa lagu sheegay in weli ay halista abaartu ka jirto qeybo ka mid ah dalka Soomaaliya jiilaalka oo dheeraaday iyo sababo caafimaad darro.
The post WFP oo dhimaysa cunada ay siiso dadka qaxootiga ee kunool dalka kenya appeared first on Ilwareed Online.
Somaaliland oo walaac kamuujisay saldhiga turkiga kafurtay magaalada muqdisho